Inaad noqoto qof daraasad leh, waa waayo-aragnimo nolol-dheer ah - Geofumadas
Juunyo, 2014 topografia
Ken Allred oo ah jacaylka shaashadda wuxuu og yahay xuduudaha, iyo xiisaha uu u qabo daraasadda in indhaha cusub ee muuqaalku u muuqdo sida xisaabin xisaabeed, waa cudur.
MLA oo ka fariistay ee St. Albert ayaan u maleyneynin laba jeer in la tilmaamayo awoodda ay shirkaduhu leeyihiin marka ay yareeyaan calaamadaha fudud ee fudud. Xitaa boqolaal sano kadib, marxaladdaan doorashooyinka waxaa loo tixgeliyaa calaamadaha nolosha mudada dheer. Qoraallada ugu sarreeya waxay qeexayaan xuduudaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah, laakiin heer yar, waxay qeexayaan xuduudaha hantida milki kasta. Muhiimada waxay dib u soo noqotaa markii ugu horeysay ee ay dadku istaagaan dhul shisheeye ah oo bilaabay inay ka doodaan cidda iska leh dhagax kasta.
«Ka shaqee Muhiimadda sahamiyeyaasha Waxa laga heli karaa Kitaabka Qudduuska ah, buugga Kitaabka Qudduuska ah ee Axdiga Hore, oo hantida dhulka la tixgeliyo. Sahamayaasha Canada sida Samuel de Champlain ama Jacques Cartier ayaa dhab ahaantii ahaa sahanno kuwaas oo abuuray khariidado ku yaala xeebaha. Degmooyinka casriga ah, xuduudaha dhabta ah ee hantida, oo mid ka mid ah qeexaya qofka leh dhulka iyo wax kasta oo ku yaala, ayaa lagu go'aamiyaa shaxanka, "ayuu yidhi Allred.
Jacaylkiisa Tijaabada wuxuu bilaabay sannadkii hore 50 shaqo fasax ah, xiliga xagaaga, isagoo baranaya injineeriyadda Jaamacadda Alberta.
"Waxay ahayd koorso shardi ah oo loogu talagalay ardayda injineernimada. Waxaan la joogay koox sahan oo ka shaqeynaya dhinaca woqooyiga Waterton National Park. Waxaan arkay sawir-qaade Ottawa oo yimid oo raadinaya raadkii dhul-beereedka oo u adeegay sida calaamadda xuduudda; Xaqiiqadani way i faraxsantahay, sababtoo ah waxaan fahamsanahay in aan noqdo daraasad, mid waa in uu qayb ahaan ka noqdaa xakameyn, "ayuu yidhi Allred.
Inkasta oo dadka degan inta badan St. Albert xusuusiyo Allred ah ay faallo siyaasadeed Aaabaheed oo ka mid ah magaalada iyo xubin ka mid ah sharci-dejinta Alberta ah, ka dib markii xagaagan in Waterton, Allred noqday sahmiyaha dawladda iyo in uu ahaa ugu horeeyay shaqeynta.
Xiisaha uu mawduuca bilaabeen inay si aadeen in, sida hiwaayad, baadhitaan ah oo ku saabsan taariikhda muuqaalka guud ee dhulka ku. Allred inta badan uu waqti free raadinaya taxadiri caan ah sida taallo oo ah sannadihii 300 jir ah, Line Mason-Dixon ee Maraykanka ama xadka Stelae weli dhow xidheenka ee Aswan on River Nile, inkasta oo in laga gooyay dhagax weyn oo Masriyiintii qadiimi ah.
"Qaar badan oo ka mid ah calaamadihii qadiimiga ahaa waa farshaxan farshaxan," ayuu yidhi Allred isaga oo na tusaya sawirrada dhismayaasha qadiimka ah, oo ay ku jiraan nuqul ka mid ah xarun Baabiliyaan ah.
dhagax oo Baabuloon, oo ku yaalla muddo Kassite ku 1700 AC waxaa iftiimiyay la oqoon hore sharxaya oo ahaa milkiilaha u ahaa dalka iyo in mowduucan ahaa xalka khilaafka xuduuda ah, ayaa sheegay in Allred.
"Tani waxay muujineysaa kaalinta ay ku leeyihiin shahaadooyinka iyo muhiimada ay leedahay dejinta xudduudaha si ay u xalliyaan khilaafaadka deriska ah ee ka dhanka ah dadka ay ka soo jeedaan," ayuu yidhi.
Masraxa ayaa amar ku bixinaya
Qodobka guud ee farshaxanka waa sawirkaas waa mid amar ah. Xeerkani waa kan ku sii jiraya khilaaf kasta oo xuduud ah.
Amarrada la soo sheegay ama xitaa dukumiintiyada qorani ma laha awood isku mid ah sida hannaanka sahaminta. Xitaa xukun dhab ah kama dhigayo xariiqda dhabta ah ee dhulka oo tilmaamaya halka uu qofku ka bilaabmayo oo uu ku dhammeeyo kan kale.
In the case of Mason Dixon-Line ah, tusaale ahaan, sababaynta kala bixiyc 1700s ahaa in King of England ay dhisantay lahaanshaha dalka reer William Penn ku salaysan 40 ee isku midka ah. Si kastaba ha noqotee, baaritaanka asalka ah ee lagu sameeyay lama helin midkaas.
Si kastaba ha noqotee, markii go'aanka xuduudku uu tagay oo dhan maxkamad, calaamadaha lagu aasaasay kacdoonkii asalka ahaa ayaa la sii waday. Tan macneheedu waxa weeye iyada oo ku saleysan xariiqda lagu qeexay sahanka ugu sarreeya ee Mason-Dixon, Philadelphia wuxuu ku yaalaa Pennsylvania halkii Maryland.
"Mabda'a isku mid ah ayaa u haya xuduudaha caalamiga ah sida 49 isbarbardhig," ayuu yidhi Allred. "Kanadiyaan - Xuduuda Ameerikaan ma ahan mid ku saleysan 49 barbar socda."
Near gurigiisa oo ku yaala 1861, Aabbaha Albert Lacombe halkan siiyey degayaasha ugu horeysay ee dalka St. Albert, nidaamka sixitaanka on set oo ah meelaha koontoroolidda in webi oo ku salaysan habka Kubeek. Gooni walba wuxuu helay dhar cidhiidhi ah oo ah dhul wabiga wabiga Sturgeon.
In 1869, sahmiyaha la odhan jiray Major Webb ayaa loo diray by dowladda Kanada ay u fuliyaan qaadida meelaha Nile ku yaalla dejinta River Cas ee Manitoba, iyadoo la isticmaalayo habka duurka cabiraada aagga geesoolayaasha. Louis Riel ayaa dib u eegay hannaanka ra'yi ururinta ee ay sameeyeen Shabakada Webb oo isaga joojiyay.
Allred wuxuu usheegay farshaxanka Lewis Lavoie of St. Albert inuu rinjiyeeyo rinjiyeynta muujinaya waqtigan taariikhiga ah.
"Markii Riel joojiyay nidaamkan kormeerka shaashadda sare, waxay bedeshay joqraafiyada galbeedka Kanada," ayuu yidhi Allred.
Nidaamka loo adeegsado baaritaanka sahan ee Manitoba ee Manitoba wuxuu ahaa suuq-xayeysi. Webb ayaa looga baahnaa inuu soo saaro dhulalka dhul-beereedka 800 oo isku dayaya inuu soo jiito dadka deggan degaanka waqooyiga ee xuduudaha Maraykanka. Maraykanku waxay kiciyeen beelahooda degaanka 600.
"Waxay isku dayayeen in ay soo jiidaan gumeysiga iyagoo siinaya dhul ka badan kuwa Mareykanka ah," ayuu yiri Allred.
Nidaamka xawaaraha riparian ayaa sidoo kale dhibaato ka soo gaadhay St. Albert. 1877, shan shacab oo uu hoggaaminayo Chief Inspector M. Deane ayaa laga soo diray Edmonton ilaa St. Albert.
"Degayaasha Mestizo soo horjeeda shaqada kooxda reer kormeerayaal xagga sababtoo ah dawladda federaalka doonayay inay dalka soo galay qaybaha kala qaybiyaan," ayuu yiri Jean Leebody, bandhigyo duwaha ee Museum Heritage ee, hadda ka fariistay, oo cilmibaadhis dhibaatada qaab dhismeedka ee St. Albert.
"Qayb ka mid ah dhibaatada ayaa ahayd in mestizos aan si rasmi ah loo siinin kaydka. Waxay haystaan ​​dukumiinti ayan lahayn qiime rasmi ah. In St. Albert, dadka degan mestizo waxay ku hanjabeen inay joojinayaan shaqada haddii habka loo yaqaan 'podcasting method' la bedelo, qasbaya qaswadayaasha iyo Aabbaha Leduc inay soo faragaliyaan. "
degayaasha Mestizo arkay Deane iyo kooxda uu St. Albert qiyaas si loo abuuro dhul nidaamka qaybinta tahay in ay magaalada oo waxay bilaabeen inay argagax sababta oo ah waxay ka cabsadeen badiyay xaq u leeyihiin inay soo xerogeliyaan. Haddii tani dib loo cabbiro, dadka degan waxay ku doodeen, ugu yaraan todoba qoys oo lahaan lahaa lahaanshaha qaybta isla dhulka. Qaar ka mid ah dadka degan waxay luminayaan helitaankooda wabiga oo aad muhiim u ah beeraha iyo kalluumeysiga. Dhamaan wadooyinka, oo la siman tan, waa in la bedelaa.
"Xukuumaddu ma aysan bartin casharka. Ma uusan wax ka baranin wixii ka dhacay Manitoba oo keenay dhibaatooyinka halkaan iyo Batoche ee Saskatchewan, "ayuu yidhi Allred.
Isla mar ahaantaana, dadka degan mestizo ee St. Albert waxay soo dhaweeyeen nidaamka sahaminta rasmiga ah ee rasmiga ah sababta oo ah nidaamka qaybinta dhulka aan rasmiga ah ee Wada-xaajoodka ayaa keenay khilaafaad badan.
Sida laga soo xigtay taariikhda taariikhda maxaliga ah ee Black Robe's Vision, sheegashada dhuleed ayaa ah arrin maalin kasta ah. Degmooyinka cusubi waxay si fudud u saameeyeen dantooda dhamaan hantidooda.
Aragtida muuqatada dawladu waxay soo saartay arrin horudhac ah iyo kulan dadweyne ayaa lagu qabtay St. Albert waxaa ka soo qaybgalay dad ka socdey beelaha kale ee ay ka mid yihiin Fort Saskatchewan iyo Edmonton. Aasaaskii ayaa la qaaday, waxaana loo dhiibay aabbaha Leduc iyo Daniel Maloney, oo deggan degganaha St. Albert, ayaa loo diray Ottawa si ay uga doodaan kiiska iyaga oo ilaalinaya nidaamka webiga ee St. Albert. Waxay ahaayeen kuwo guuleystey, natiijadaasna, nidaamkii xajmiga ee hadda jira ayaa la dayactiray.
"Markii ay magaaladu sii korodhey, nunsuladu waxay iibiyeen dhulkooda waxaana loo kala qaybiyay. Markay magaaladu balaarisay, kuwa ku leh webiyada waxay iibiyeen alaabtooda; kuwan ayaa lagu iibinayay sida miisaska loo yaqaanno "square Albert", waxaannu hadda ku jirnaa St. Albert, "ayuu yidhi Leebody.
Dhismayaasha cimriga ee ay soo bandhigeen shaandhayntiyeyaashu waxay ku hadheen calaamad muujinaysa hantida saxda ah laakiin ma fududa in la helo.
Marka biyuhu kor u kaco ama ay hoos u dhacdo, sida kiiska Big Lake, xuduudaha weli waa loo baahan yahay in la dhiso. Oo haddii dhirta ay ku koraan calaamadaha, kuwani way isku mid noqon karaan si ay u helaan.
«Qalabka ugu qiimaha badan ee sahamiyuhu waa majarafad. Mararka qaarkood sahamiyeyaashu waxay qodaan oo raadiyaan wareeg ah wareeg ah oo ay ku guulaysatay laakiin waa ku filan tahay jiritaanka caaryada bidixda, "ayuu yidhi Allred.
Si aad u muujiso dhibaatada helitaanka calaamadaha, Allred wuxuu tusay mid ka mid ah calaamad u ah baaritaanka wadada oo lagu calaamadeeyay R-4; waxay ku taala bartamaha keynta White Spruce oo u dhow harada weyn.
"Tani waxay asal ahaan ahayd mid calaamad u ah musqul-dhuleed," ayuu yiri.
Calaamaduhu hadda waa dammaanad haysata cajalad ciriirig ah oo caag ah, oo ku xiran dusha sare. Markii Allred laga saaray caleemaha iyo qashinka, wuxuu helay calaamadda birta ee asalka ah. Deegaanka, wuxuu sidoo kale ka helay niyadjab aan cidhiidhi ahayn dhulka.
"Hadda waxaan heli karaa kaliya niyad-jabka, laakiin waa qulqulka waddooyinka riparian waa inuu ahaa afar niyadjab oo ah 12 inches oo qoto dheer oo leh degmo 18 centimeters ah. Niyadjabku waxay ahaayeen calaamad kale oo beeraleyda ah oo aan ku khasaarin kuwaas, sababtoo ah calaamaduhu way lumin karaan, "ayuu yiri.
Allred marvels ee shaqada ee hore sahaminta kuwaas oo, sida David Thompson, sameeyey baaritaan aan la garanayn, inta badan meelaha ugu nabadgelyo ee dalka iyo kufilan xaaladaha cimilada ugu daran.
«Sahamiyeyaashu waa kuwo hor leh. Xaaladda Thompson, waxay ahayd shaqo dhammaystiran oo la sameeyay iyadoo la ilaalinayo xiddigaha. Ma jirto meel kale oo tixraac ah isaga, "ayuu yidhi Allred.
Waxa uu ku dhuftay fikradda ah in baaritaanku yahay mid caajis ah.
"Wax badani waxay kuxiran yihiin astaamaha dhulka iyo waliba shay kasta oo xaddidan," ayuu yidhi.
"Sahamiyeyaashu waa inay ku fiicnaadaan trigonometry; waa inay ku fiicnaadaan fahamka nidaamka sharciga iyo farshaxanka iyo khariidadeynta iyo sidoo kale juqraafi. Waa inay ogaadaan waxa horey u jiray. Dhulka dushiisa waa taariikh '».
Waxaa laga soo xigtay: stalbertgazette
Post Next Calaamadaha darfaha iyo Isku-dhafka Khariidadaha Google - 5 Maxaa Cusub ee Microstation V8iNext »
4 Jawaab ayaa ah "Inay noqoto mid sareeye, waa waayo-aragnimo u ah nolosha"
C. Marshal isagu wuxuu leeyahay:
Wax xiiso leh !!!!!!!! Ma lahaan doonaan taariikh nololeed, oo ka mid ah Mexico? Salaan!
FRANCISCO JAVIER BERLIN DE LA CRUZ isagu wuxuu leeyahay:
Qiimihiisu yahay in ay baaritaan ku professionalized in this aad u xiiso badan oo ka buuxa duurka SATISFACTIONS, VIDEO A KU SAABSAN AMA WAX sheekooyinka kale.
Norberto isagu wuxuu leeyahay:
Qoraal buuxa oo taariikhi ah oo ka tarjumaya muhiimadda topographer
Ericsson qalin isagu wuxuu leeyahay: